विकासको विचित्र : सडकको बीचमै रूख राखेर कालोपत्रे गर्ने याे कस्ताे खालकाे विकास हाे ? - Malayakhabar
होम पेज देश विकासको विचित्र : सडकको बीचमै रूख राखेर कालोपत्रे गर्ने याे कस्ताे खालकाे...
चितवन := देशको बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ ? कसरी खर्च भइरहेको छ ? चितवन देवघाटको यो चित्रले देशको विचित्र विकासलाई प्रस्ट देखाउँछ। जनताबाट संकलन गरिएको एक–एक रुपैयाँ राजस्वबाट चितवनमा सडक पिच गरिएको छ, जहाँ सडकको बीचमै ठाउँ–ठाउँमा सालका रूख ठिंग उभिएका छन् ।
अघिल्लो लेख आज बिहान उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएपछि सकियो छठपर्व।
पछिल्लो लेख दशैँ र तिहार मनाएर रोजगारीमा फर्कनेको सङ्ख्या बढ्दै।